VIDEO: Madaxweyne Qoorqoor oo fashiliyey shirka Muqdisho,”Waxaan u joognaa in laysla qaato Qodobadii Dhuusamareeb 3″.
September 16, 2020 Xuseen 11
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka hadlay kulamadii Dhuusamareeb iyo shirka haatan ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in Galmudug oo gudanaysa waajibaad ka saarnaa Soomaaliya ay martigelisey shirarkaasi ayna ka soo bexeen qodobo ahmiyad gaar ah u leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweyne Qoorqoor wuxuu sheegay in shirka hadda ka socda magaalada Muqdisho uu yahay turxaan bixinta qodobadii ka soo baxay Dhuusaamareeb 3, aysanna jirin wax cusub oo miiska saaran.
“Galmudug dowladdeeda iyo shacabkeeduba waxay isa saareen mas’uuliyadda aad ogtihiin oo fadhiyadaas waaweyn oo aadka u ballaarnaa oo aan hubno in golaha sharafta leh (aqalka sare) ka qayb galeen, Ilaahay fadligiis waa lagu guulaystay maantay waxay noqotay Galmudug gogoshii ay ka soo baxday in qaab doorasho gabagabadiisii ama isla qaadashadiisii loo fadhafiyo qodobadii ka soo baxay Dhuusamareeb 3” ayuu yiri Qoorqoor.
Madaxweynaha Galmudug waxa uu sheegay in arrintaasi ay ahayd waajib saarnaa Galmudug haddana ay u fadhiyaan in laysla qaato qodobadii ka soo baxay shirarkii hore sida uu hadalka u dhigay.
Nonsense, Muqdisho waxaa loo joogaa sidii laga yeeli lahaa doorashada 2021 iyo qaabkii loo qaban lahaa, dhuusamareeb iyo ragii kusoo sheekaystay ayagaa og waxay kusoo sheekaysteen, hadii ay wax kusoo heshiineena waxoodu aayado quraan ah maahan. Siyaasada ex Gunery Qoor Qoor waxay kusoo ururtay shirkii dhuusamareeb kaliya waxana ku tusinaysa aragti gaabnidiisa.
Hadalkaas maalin hore ayuu ahaa oo uu Qoorqoor ka jeediyey Aqalka Sare sidii ay hore sameeyeen Deni iyo Axmed-madoobe. Ra’yigiisa ayuu dhiibtay wax dhib ahna kuma jirin hadalkiisa. Waqtigaas kadibna waxyaalo badan baa dhacay.
Qoorqoor mowqifkiisu wuxuu noqonayaa waxa aqlabiyadda reer Galmudug rabaan. Mana filayo intuu iyaga khilaafo inuu Farmaajo ugu jirayo dacay.
Shirkaan guushiisa iyo guuldarradiisu waxay ku xiran yihiin Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
1 FARMAAJO = MD JAMHUURIYADA
Ay raacsan yihiin
2 QOORQOOR = MD GALMUDUG STATE
3 WAARE = MD H/SHABEELE STATE
4 L/ GAREEN = MD SW STATE
5 FINISH = BANAADIR STATE
DENI & MADOOBE
5 vs 2!!!
Waa ciyaar natiijadeeda la garanayo.
Dhuusamareeb3 iyo in lagu kala kaco,beesha caalamkuna soo gasho,awaamiirna bixiso.
Soomaaliya run ahaantii waa wadan shiraacday dooni aanu garanayn sida loo jiheeyo. Shiraacii ayuunbey bahasha u fideeyeen. Naakhuudayaashuna wey badan yihiin oo waxay isku heystaan Shookaanta. Kollba jiho ayay u jeedinayaan. Waxwalba wey ku dhicikaraan. Waxay ku qaraqmi kartaa meelo faro badan ooanay ka fiirsaneyn.
Badmaaxyadu siiba Kaabaha Markab wadaa waxa uu ku hubeysanyahay Cilimiga Badaha. Waxa ay ku xidhan yihiin hagayaasha badaha haga. Wey ka war hayaan halka ay marayaan oo wey sii jideystaan barta ay marayaan. Waxay is waafajiyaan cimilada bada iyo routeka ay marayaan. Hadii uu jiro intuu doonaba ha yaraadee fursad uu duufaan ama Mowjado waaweyni ku dhufan karaan dee jihadaas wey ka weecdaan oo jiho kale oo degen ayay maraan. Hadaanay heysan jiho kale ama wadiiqo kale wey nageeyaan markabka illeyn naftooda haligi maayaane.
Soomaaliya inagu soo celiya. Kaba soo qaad Dastuurku inuu hagihii Markabka (GPS). Hagahana ciladi ku jirto dee waxa kaa khaldamaya jihada. Dastuurka Soomaaliya waa sidaas oo kale. Ma dhameystirna, meelo badan oo muran ka taagan yahayna wey ku jiraan. Waxa kaloo soo raaca habka Federaaliga ah ee la doortay. Habkaasna ma dhameystirna. Wax aliyaale wax la’isku waafaqsan yahay kuma jiraan. Xitaa Maamulkii Xasan Sheekh kolkuu sameynayay Maamulada qardo jeex iyo khayaali ayay wax ku sameeyeen. GALNUS baa tusaale fiican inoogu filan. Hadii xitaa dastuurkaas jaban la raacayo waxa cadaan laheyn inaanu Gobol iyo Badh noqfon karin Maamul Goboleed. Hadana sameeyeen oo waakaas meel maray. Ma waxa ay naawilayeen in Puntland laga soo jari karo Badhkey ku dhegen tahay, Ma isdhaafiya oo sameeya imika hadhowna ka werwera sixitaankiisa ayay ka aheyd. Allaahu Aclan. Inagu garan kari meyno. Waxaynu ognahay oo keliya uu maamulkaasi xadgudub ku dhisan yahay. Waxa kale oo xaajadii dhabqiyay Aqalka Sare. Maamul Goboleedka Puntland waxa uu ku leeyahay Kuraas ka badan maamulada kale. Xitaa Somaliland oo tidhi anagu idinkama mid ihin oo banaankaas ka martay ayay xubno ka siiyeen meeshaan aanan la garaneyn waxay ku saleysan yihiin. kkkkkk
Imikana Gobolkii Banaadir ayaa soo fadhiistey oo leh ana wey kan. Hadaan waxayga heli waayona Caasimada waan idinka sifeynayaa. Meeshaad doontaan bahasha ula guura. Dekedeyda yar iyo Airiportkeyga aad iska daldalneyseena waan aqaan sidaan u maamusho. Farmaajona waxa uu noqdey qalad kale oo la’idinku soo saliday. kkkkkk Wuxuu dooqeyn karo wuu dhooqeeyay, wuxuu kharibi karo oo dhana waa kharibay. Imikana dheesha wuuba sii macaan sanayaa.
Aakhirka xagay tollow ku danbeyn doontaa? Arinta Gobolka Banaadir waxaan hubaa iney la hadhi doonto shirkaas ka socda Muqdisho. Hawiyena ka hadhi maayaan, Daaroodna ogolaan maayo. Sida keli ah ee ay Daarooku ku aqbali karaana waa iyaga oo xubno dheeri ah loogu daro si ay u bareejeeyaan Muqdisho. Taasna ma arko sidey Hawiye ku yeeli doonaan. Waa loo yaabaa doorkan Soomaaliya.
Anigu kolkii hore waxaan taagnaa in doorkan la qaato talada Puntland iyo Jupaland oo doorasho dadban la qabto. Taasoo doorashooyinka lagu qabanayo xarumaha Maamul Goboleedyada oo iyagu ama hagaan ama gudi la’isku waafaqsan yahay hago. Aritna Gobolka Banaadir ayaase cusub imika oo lagu soo dhextuurey meesha. Taasina dhabaq weyn iyo khalkhal horeleh ayay gelishay jawigii shirka.
Kolkaan ka fikiray, anigu waxa iskey tusay doonidaas/markabkaas oo qaraqmay oo la wada degtey intii saarneyd oo cunaha iska wada laalaada.
Loolankii was socdaaye halla sugo cidda goobta ussoo harta waxaa hardamaya qaran soomaaliya halyeeyo u kacay oo u hogaamiyo madaxweyne farmaajo iyo qaran dumis daba dhilif u ah Dalal shisheeye marka hallays dajiyo Tay tahay tagine maalin dhow was lakala baxayaa guushu ciddii ay raacdo oo kasbsta was looking wadarta fadhiyaa
Waan aqaan sheekadaan meesha ay ku dhammaandoonto.. Waa Jabuuti Accord..
Dawladda Federaalka, dawlad goboleedyada, xisbiyada qaranka, siyaasiyiin, oday dhaqanmeedyada, bulshada raydka iyo beesha caalamka ee madax iskula jira waxay isula tegidoonaan khabiirka arrimaha Soomaaliya ee madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle..isagaa baa kala furdaaminaya maadaama uu isaga yahay ninkii markii horeba waxaan meesha isugu keeney.
Qoor Qoor awalba wuxuu Madaxweyne u ahaa GOBOL iyo NUS aanan wax sharciyad ah meesha ku fadhiyin.
Kaas oo uu 8 kursi oo been ah awalba ku soo qaatay! Markaa ayuu u doodayaa in aay 13 kursi oo kale oo BUG ah beeshiisu ku hesho, HAL Gobol oo kale! Isagoo ku doodayo in aay u istaageen, danta umada Soomaaliyeed!!
Haddiiba aay dan Soomaaliyeed u dadaaleeyso beeshii Bililiqa ku noolka taariikhda u lahayd, haddaba Soomaaliya in aay hagaagto yaa ka hortaagan?!
Anigu waxaan u arkaa inuu Qoor Qoor saxan yahay….qoor Qoor ma dalban in shirka lagu qabto dhuuso-mareeb, Waxaa cosadey deni calooley oo faroole iyo kooxdiisa dhagta ugu sheegey waxba xamar ha tagin waxaa laga yabaa inan farmaajo xaare kaga adkaano dhuuso-mareeb…. maxamuud salabeenku waa xooolo xukun jecel wax walbana xukun jaceel bey u sameynayaan ..maanta waxaa lagu qasbey iney xamar xoog ku yimaadan. PUNTLAND WAXAA dhisay dadka deeganka oo ah dad aad u xadaarad dheer….
Mar hore ayaan idiin sheegay Go,aamada Dhuusomareebto 3 waxba lagama beli karo , xitaa waxaa saxeexay MDX Farmaajo. Binti-girl & Madoobe waxay rabaan waa …waji qurxis..Face saving.. waxay u sheegaan dadkii ay ka yimaadeen… aniga tayda ha la ii yeelo ayay Binti-girl wadaaa, lagaa yeeli maayo ayaa lagu yidhi.
Go,aamada Dhuusomareebto 3 waxba lagama bedeli karo , ha daalina ciyaaaloow.
Binti-girl & doqonka madoow ee daba socda… waxaa lagu casuuumay Villa Wardhiiglay way diideeen, Dhuuso mareeb ayaa lagu balamay , way iman waayeen 1 week ayaa la sugayay , wa diideen in ay soo gola fadhiistaan doodooda sheegtaan, Soomaalidu dhaqan bay leedahay , maahmaah ayaa tidhaahda , nin shir ka ka kacay siigo yaraa .. maanta iyaga loo joojin maayo waxay qasban yihiin Go,amaadii Dhuusomareebto 3 lagu gaadhay in ay qaataan.